Waa in la joojiyaa musuqmaasuqa qaawan uu Dahabshil Group kula wareegay tamarta Somaliland – Guban Media
The grounding breaking ceremony of Sompower solar farm in north Hargeisa. (photo/file)
Waa in la joojiyaa musuqmaasuqa qaawan uu Dahabshil Group kula wareegay tamarta Somaliland
November 4, 2019 November 4, 2019 Ali Mohamed 339 Views 0 Comments
Hargeisa—Dhawaan ayey ahayd markii Madaxwaynaha Somaliland Muse Biixi xadhiga ka jaray mashruuca Bacado ee Shirkada Sompower ka hirgalisay waqooyiga magaalada Hargeysa, kaasi oo wakhti xaadirkan ay hirkadaasi u isticmaasho laydhka ay Bulshada Siiso.
Xogaha aanu helayo ayaa sheegaya in deeqaha Baanka Adduunku siiyo Shirkadda Sompower ay badankeedu la xidhiidho sidii shacaba loo gaadhsiin lahaa laydh jaban oo tayo leh, balse arintaasi aanay mar dambe shirkaddu samaynin. Wallow, masuuliyiinta shirkaddu ay xafladii maalintii dhawayd si af-gobaadsi ah madasha uga sheegeen inay qiimaha laydhka hoos u dhigi doonaan 20% (boqolkiiba labaatan) sidoo kale, deeqda Banka Adduunku siiyey shirkadda Sompower, waxa ku jira in iyagana dab laga dhaliyo magaalooyinka Burco iyo Gabiley. Iyadoo sida xogaha aanu ka helayso sheegayaan in ay jiraan haayado caalamiya oo iyana dhaqaale kusiiyay shirkada sompower hirgalinta laydhka laga dhalinayo tamarta Cadceeda,
← In Djibouti, opposition protests met with deadly police force
Guban View: Dr Gaboose is a hypocrite and an apologist for Somalia →